China Silicone Vamwe fekitori uye vagadziri | SJJ
2 mu1 Pusha Pop Fidget Spinner
New Technique - 3D Dhizaini W ...
Fidget Bubble Nhare Mhosva
AirTag Keychain Nyaya
Nyoro PVC Miniature / Anime ...
Silicone Push Pop Bubble Matoyi
Metal Yakagadzirwa Acrylic Medals
Zvinhu zvesilicone zvinoshandiswa zvakasiyana uye zvakaungana kana kusanganiswa nezvimwe zvinhu zvakaita kuti nyika yedu ive yakanaka, hupenyu hwedu huve nyore uye hunonakidza. Zvinhu zvesilicone zvinowanikwa kwese kwese zvinoshandiswa nemunhu wese zvisinei vakuru kana vana.
Silicone zvinhu zvine zvakawanda zvakanakira hunhu:
* Yakapfava uye yakaoma kune ese marudzi ehukuru uye maumbirwo
* Kutonhora uye kupisa kupisa, kushora kwemvura uye kushambidzwa nyore kuti kukwane mamiriro ekunze akasiyana
* Chikafu mamaki, Eco-inoshamwaridzika uye zvakatipoteredza zvinokodzera chikafu uye dhayeti
* Yakasimba uye ductility kwenguva yakareba yakashandiswa
* Mavara akanyorwa anokwezva ekuona maitiro uye kukwidziridzwa, kushambadza uye zvipo nezvimwe zvakadaro.
Isu Pretty Shiny Zvipo zvine zvimwe zvinhu zvesilicone zviripo zviumbwa zvechando akanaka maforoma, mabhebhi evacheche, mabhodhoro emabhodhoro, magirazi ewaini, magirazi ewaini mamaki uye zvichingodaro. Vakangwara vagadziri vachiri kuyedza kugadzira zvimwe silicone zvinhu kusangana nevatengi'demands. Zvirongwa zvako zvechinhu chero chipi zvacho zvinogamuchirwa. Ndokumbira utumire mibvunzo yako chero nguva kuti uwane rumwe ruzivo, kutaurirana kwehunyanzvi, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, sevhisi yakanakisa inozopihwa munguva pfupi!
Zvishandiso: Silicone zvinhu
Dhizaini uye saizi: 2D kana 3D, Mahara muforoma muripo kune edu aripo magadzirirwo
zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinogamuchirwa.
Colors: Inogona kufananidza PMS mavara, kana zvichienderana nezvaunoda.
Logos: Logos inogona kuve yakadhindwa, yakadhirowewa kana kuraswa pamwe kana isina ruvara
Kurongedza: 1 pc / poly bhegi, kana tevedzera kuraira kwako
MOQ: Kutaurirana nyaya nenyaya
Pashure: Silicone Kicheni Zvinhu
Silicone Inosvikika Mukombe